मर्चेन्ट बैंकहरुको नाफा घट्दा संचालनमा कठिनाई, धितोपत्र बोर्ड भन्छ- लगानीको दायरा थप्दैछौं :: BIZMANDU
मर्चेन्ट बैंकहरुको नाफा घट्दा संचालनमा कठिनाई, धितोपत्र बोर्ड भन्छ- लगानीको दायरा थप्दैछौं
प्रकाशित मिति: Apr 8, 2018 11:38 AM
काठमाडौं। मर्चेन्ट बैंकहरुको संख्या थपिँदै जाँदा संचालनमा कठिनाइ देखिन थालेको छ। नाफा घटेकाले अबका दिनमा व्यवसाय चलाउन एकदमै अफ्ठेरो हुने एनआइविएल एस क्यापिटलका महाप्रवन्धक मेख थापा बताउँछन्।
इस्यु म्यानेजर र अण्डरराइटरको व्यवसायमा एकदमै जोखिममा रहेको थापाको भनाई छ। बुटवल पावर कम्पनीको एफपिओको उदाहरण दिँदै उनले भने- ‘यो ब्यवसाय अति नै जोखिमपूर्ण बन्दै गयो।’
सिद्धार्थ क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुब तिमिल्सिना भने थापाभन्दा फरक मत राख्छन्। उनका अनुसार मर्चेन्ट बैंकको बिजनेस घटेको होइन व्यवसाय ट्रान्सफरमेसन भएको हो।
पहिले मर्चेन्ट बैंकले फण्ड म्यानेजमेन्टको काम गर्दैनथे। तर हिजोआज म्युचुअल फण्डले पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टको पनि काम गर्न पाउने हुँदा व्यवसाय नघट्ने तिमिल्सिना बताउँछन्।
क्यापिटलले भेन्चर क्यापिटलको काम गर्न पनि बोर्डसँग अनुमति माग गरिरहेको छ। यसले भविष्यमा व्यवसायको दायरा फराकिलो हुने हुँदा मर्चेन्ट बैंक आत्तिनु पर्ने अवस्था नरहेको उनी तर्क गर्छन्। ‘मर्चेन्ट बैंकभन्दा पनि इन्भेष्टमेन्ट बैंकको रुप लिने क्रममा छ। यसले भोलिका दिनमा व्यवसाय बढ्नेछ’- उनले भने।
तर थापा भने मर्चेन्ट बैंकहरुले नाफा लिन सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टको व्यवसाय अहिलेको अवस्थामा व्यावसायिक हुन नसक्दा फाइदा लिन सक्ने अवस्थामा नरहेको उनको भनाई छ। शेयर बजारको उतारचढाव अनुसार म्युचुअल फण्डको नाफा निर्धारण हुने भएकोले मर्चेन्ट बैंकको व्यवसाय दीर्घकालीन हुन नसक्ने उनी बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा मर्चेन्ट बैंकले आफ्नो व्यवसाय घाटामा संचालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको तर्क छ।
के के गर्न पाउँछन् मर्चेन्ट बैंकरले
मर्चेन्ट बैंकर नियमावली अनुसार मर्चेन्ट बैंकले पाँचवटा काम गर्नकालागि अनुमति लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। बैंकले धितोपत्र निष्काशन तथा विक्री प्रवन्धक, शेयर रजिष्ट्रार, धितोपत्र प्रत्याभूतिकर्ता, लगानी व्यवस्थापक र संस्थागत परामर्शदाताको सेवा प्रदान गर्नको लागि छुट्टाछुट्टै अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यहि व्यवस्था अनुसार बोर्डबाट २४ वटा मर्चेन्ट बैंकले लाइसेन्स अनुमतिपत्र पाएका छन् जसमा १८ वटाले धितोपत्र निष्काशन तथा विक्री प्रवन्धक, १७ वटाले धितोपत्र प्रत्याभूतिकर्ता, २० वटाले शेयर रजिस्ट्रार, २३ वटाले लगानी व्यवस्थापकको काम गर्ने अनुमति लिएका छन्। तर संस्थागत परामर्शदाताको काम गर्नकालागि लाइसेन्स लिने मर्चेन्ट बैंक छैनन्।
कसरी हुन्छ आम्दानी
मर्चेन्ट बैंकले धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रवन्धकको काम गरेर न्युनतम एक लाखदेखि माथिको आम्दानी गर्छन्। यस्तोमा प्राथमिक शेयर निष्कासन, एफपिओ निष्कासन, हकप्रद निष्कासन साथै सार्वजनिक शेयर निष्कासनपनि मर्चेन्ट बैंकको आम्दानीको स्रोत हो।
शेयर रजिष्ट्रारको जिम्मा पाएका मर्चेन्ट बैंकले नियमित रुपमा आम्दानी गर्न सक्छन्। त्यस्तै डिम्याट खाता संचालनबाट पनि वार्षिक रुपमा आम्दानी गर्न सक्छन्। दोस्रो बजारमा हुने कारोबारबाट पनि मर्चेन्ट बैंकले आम्दानी गर्न सक्छन्।
ब्यापार घटेकै हो त ?
धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनकालागि पाइपलाइनमा जम्मा १७ वटा कम्पनीमात्रै रहेका छन्। त्यस्तै हकप्रदकालागि पनि १७ वटा मात्रै पाइपलाइनमा रहेका छन्।
एनआइविएल एस क्यापिटलका थापा यो आर्थिक वर्षमा अधिकांश मर्चेन्ट बैंकको नाफा ५० प्रतिशतभन्दा धेरैले घट्ने ठोकुवा गर्छन्। यो वर्ष म्युचुअल फण्ड घाटामा छन् भने धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रवन्धकको काम गर्नेकालागि पनि यस वर्ष कमैले सार्वजनिक शेयर निष्कासन गरेका छन्। जसले गर्दा पनि नाफा घट्ने प्रक्षेपण गरिएको हो।
यति धेरै मर्चेन्ट बैंक किन?
यसअघि धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धकको मात्रै काम गर्दै आएका मर्चेन्ट बैंकलार्इ बिजनेस बढाउन काम गर्न पाउने दायरा बढाएको धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले बताए। ‘भोलिका दिनमा रियल सेक्टर पनि बजारमा आउँदैछन्। यसले पनि उनीहरुको बिजनेसको दायरा बढ्छ’- कार्कीले भने।
आउँदो असारदेखि अहिले भएकै क्यापिटलले पनि न्यूनतम २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी पुर्याउनु पर्नेछ। साथै उनीहरुलार्इ भेन्चर क्यापिटलकालागि पनि काम गर्न पाउने व्यबस्था गरिने बताइएको छ। पहिला ४ वटा काम मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था गरेकोमा अहिले संस्थागत परामर्शदाताकालागि पनि काम गर्न पाउने नियम बनाएको अध्यक्ष कार्कीले बताए।
तर बोर्डले मर्चेन्ट बैंकको लाइसेन्स दिँदा अध्ययन गरेर आवश्यकता अनुसार मात्रै दिनुपर्ने थापा बताउँछन्। दीर्घकालीन रुपमा टिक्ने हिसावले लाइसेन्स दिएमा राम्रो हुने उनको भनाई छ।
बोर्डले पनि नयाँ लाइसेन्स दिँदा जथाभावी नदिने कार्की बताउँछन्। हामीले मर्चेन्ट बैंकको व्यवसाय विस्तारकालागि नयाँ नयाँ क्षेत्रमा काम गर्ने अनुमति प्रदान गर्दै आएको हुँदा उनीहरुले त्यसै अनुरुप गरेमा घाटा खानु नपर्ने उनी बताउँछन्। आगामी दिनमा बोर्डले थप अध्ययन गरेर लगानीको दायरा थप्दै जाने उनले बताए।
किन लिन्छन् लाइसेन्स?
मर्चेन्ट बैंकको सेवा प्रदान गर्ने अधिकांश बैंक नै रहेका छन्। उनीहरुले एकद्धार प्रणाली अर्थात एउटै छानामुनि सबै सेवा दिने भन्दै मर्चेन्ट बैंकको पनि स्थापना गरेको थापा बताउँछन्। यसले गर्दा घाटामै गएपनि कम्पनी संचालन हुने अवस्था रहेको छ।
हाल १५ वटा बाणिज्य बैंकले मर्चेन्ट बैंकको सेवा दिएका छन्। अन्य केही विकास बैंकका साथै इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी र नागरिक लगानी कोषले पनि मर्चेन्ट बैंकको काम गर्दै आएको छ।
मर्चेन्ट बैंकहरुको नाफा घट्दा संचालनमा कठिनाई, धितोपत्र बोर्ड भन्छ- लगानीको दायरा थप्दैछौं को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।